Mmeghachi omume-bonded sịlịkọn carbide n'ekwú ọkụ efere - China ZhongPeng Special Ceramics
Ọ bụ ụdị nke ngwaahịa na elu ike, elu ekweghị ekwe, elu wear eguzogide, na ezi ọxịdashọn eguzogide, thermal ujo-eguzogide ma na ndị ọzọ Njirimara. RBSIC nwere ihe magburu onwe ya ogologo oge arụmọrụ (Jiri ya tụnyere RESIC na SNBSC) na-ekwe ike bụ ihe karịa ugboro abụọ karịa RESIC, 50% elu karịa SNBSC. Mmeghachi omume bonded sịlịkọn carbide seramiiki ngwa: The dị iche iche ulo oru ite-ọku uku, na desulphurization ngwá, nnukwu boiers na ndị ọzọ na ígwè, na egbuke, igwe ...
Ọ bụ ụdị nke ngwaahịa na elu ike, elu ekweghị ekwe, elu wear eguzogide, na ezi ọxịdashọn eguzogide, thermal ujo-eguzogide ma na ndị ọzọ Njirimara. RBSIC nwere ihe magburu onwe ya ogologo oge arụmọrụ (Jiri ya tụnyere RESIC na SNBSC) na-ekwe ike bụ ihe karịa ugboro abụọ karịa RESIC, 50% elu karịa SNBSC.
Mmeghachi omume bonded sịlịkọn carbide seramiiki ngwa:
The dị iche iche ulo oru ite-ọku uku, na desulphurization ngwá, nnukwu boiers na ndị ọzọ na ígwè, na egbuke, na ígwè, na nkà mmụta banyere ígwè, ngwá electronic, na ọgwụ, ndị petroteum, ígwè na ígwè ụlọ ọrụ, ndị agha ụlọ ọrụ, na ụgbọelu ụlọ ọrụ na ndị ọzọ ubi.
Nka na ụzụ datasheet:
njupụta g / cm3 3,02
o porosity % <0,1
kwes conductivity W / Mak 45 (1200 ℃)
kwes Anya k-1 × 10-6 4.5
Vickers-ekweghị ekwe Gpa 20
Acid-Gosiri Alikaline Ezigbo
Previous: Mmeghachi omume bonded Silicon Carbide efere
Osote: Mmeghachi omume-bonded sịlịkọn carbide efere
elu okpomọkụ eguzogide ọgwụ efere nke n'ekwú ọkụ
Mmeghachi Omume bonded Silicon Carbide efere
mmeghachi omume bonded Silicon Carbide Pusher efere
Mmeghachi omume-bonded Silicon Carbide n'ekwú ọkụ efere
Silicon Carbide n'ekwú ọkụ Ngwá ụlọ
Silicon Carbide efere
Special nkebisi Efere efere
RBSiC (SiSiC) burner tube, burner nozulu
ire ọkụ nozulu
RBSC Okpomọkụ Exchanger